Mandray ny hazo fijaliana ka manaraka an’ i Kristy
"Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy." Sal. 10:27.
Endrey ny hasarobidin'ny fahafantarana fa manana namana mahatoky isika, Izay hanome antsika toetra mendrika sy ambony, ahafahantsika miditra any an-danitra hiaraka amin'ireo anjely! Ahiany avokoa ny zanany rehetra. Manana fiadanam-po izay tsy azon'ny hafa omena na esorina izy ireo. Ny fahaverezana haren'ny tany dia tsy hahavery fanantenana na fonenana azy ireo(...)
Mandinika izao tontolo izao izay somebiseby mikatsaka ny harena eto an-tany i Kristy. Maro no hitany manao ny ainy tsy ho zavatra, manandrana tetika iray, avy eo iray hafa koa, mba hahazoany ilay haren'ny tany efa notsiriritiny ka antenainy fa hahafa-po azy noho ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tenany. Ao anatin'izany enjikenjika izany anefa dia veriny ilay hany lalana mankany amin'ilay tena harena.
Toy Izay manana fahefana dia miteny amin'ny olona toy izany i Kristy, miantso azy ireo hanaraka Azy. Manolo-tena hitarika azy ireo ho any amin'ilay harena maharitra mandrakizay Izy. Atorony azy ireo ilay lalan-terin'ny fandavan-tena sy fanoloran-tena. Ireo izay mandeha amin'izany lalana izany ka mandresy ny sakantsakana rehetra dia ho tafita amin'ilay tany be voninahitra manandratra ny hazo fijaliana izy ireo dia hahatsapa fa manandratra azy ireo ny hazo fijaliana, ary amin'ny farany dia ho azony ilay harena tsy mety lo.
Maro ireo izay manantena fiarovana amin'ny harena eto an-tany. Kristy dia maniry ny hanala ilay sombin-kazo izay mampanjavona ny fahitan'izy ireo ka manakana azy tsy hahita ilay voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay. Afangaron'izy ireo ny nofinofy sy ny tena izy ka tsy hitany intsony ny voninahitr'ilay tontolo maharitra mandrakizay. Miantso azy i Kristy mba handefa ny fijeriiny any ankoatra ny ankehitriny ary hahita ny mandrakizay. L„ t. 264, 1903.
Tsy maintsy manandratra ny hazo fijaliana sy manaradia an'i Kristy isika. Ireo izay manandratra ny hazo fijaliana dia hahatsapa fa ny fanaovany izany dia hampisandratra azy ka hanome hery sy zotom-po azy, hampiseho aminy Ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao iontolo izao. R Jolay 1905.